Cartography - Page 5 - Geofumadas
Ortofotos wakhtiga dhabta ah?
Waxaan qabaa in arrintan ay tahay mid xasaasi ah, laakiin hey, aynu furo maskaxda iyo fikir in mudo ah oo ku saabsan khayaanada iyo beenta waxa halkaas ku hadlay. In 2.0 meeh shir la soo dhaafay ayaa dhawaan soo bandhigay by Jeffrey Johnson iyo David Riallant, labada Pict'Earth; (kan ugu horreeya ee codsiyada webka iyo ...
Cartografia, cadastre, Google Earth / Maps, tabo cusub
Google Earth iyo tiknoolojiyad
"Criolla Technology" waxa uu ahaa magaca sida la odhan jiray dhaqan photogrammetric isticmaalo magaalada ka mid ah Colombia, dhigay drones at height a of mitir 800. Sida laga soo xigtay warbixintan, saxnaanta gaari by guys, kuwaas oo, ka badan accuracies in uu leeyahay Google Earth oo sida muuqata ay ahaayeen marka hore si ay u ...
300 hababka loo arko adduunka
Wolrldprocessor bogga muujinaya warbixin kooban oo aad ku soo bandhigay, 300 siyaabo arko dunida, halkan waxaan ku tusi ugu yaraan saddex: dariiqyada saliidda ... hadlaya of isteroberi Vehicle Dalalka Production in la soo wareegtay Protocol Kyoto ee halkaas tago iyo eegto bogga ... Via: Colliers Atlas Blog
Koorso ku saabsan Nidaamka Dijital ah ee Sawirada Satellite
Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno sida Hay'adda Iskaashiga Iskaashiga Caalamiga ah ee Horumarinta AECID, oo hore loo yaqaan AECI, waxay gashay mawduuca kartoonka iyo nidaamyada xogta juqraafiyeed. Markii hore, waxa uu u sheegay koorsada Real Estate Catastro in lagu qabto magaalada Bolivia. Waa hagaag sidoo kale waxaan aragnaa in laga bilaabo 19 illaa August 29 ...
Ka sheekeynta kartoonka ... iyada oon erayo badan
Mar labaad ayaan ku socdaa safar, sidaas ayaan halkaas kaaga tagayaa si aan u eego gurigaaga.
blog egeomates My
Halka laga helayo khariidadaha El Salvador
Markii hore waxaan la hadlay oo ku saabsan meesha laga helo maps of Honduras, maxaa jira, haddii aan eegno deriskaaga El Salvador. El Salvador la mid tahay taariikhda dalalka Latin American kale oo badan, kuwaasi oo ay taageerayaan ciidamada Maraykanka ugu yaraan la abuuro of machadyada juqraafi ka ...
UTM ayaa isku duweysa qaybta koonfurta
Iyada oo laga jawaabayo codsi ka yimid Anahi of Bolivia sameeyey waan abuuray file ay ku jiraan meelaha UTM of South America, kaas oo noqon kara mid aad u faa'iido leh ujeeddooyin waxbarasho ah, inkastoo aan ku talinaynaa reading boostada "Garashada wadataa UTM." Markaad fureyso faylka adigoo isticmaalaya Google Earth, waxaad si sahlan u faahfaahin kartaa saameynta fasalka ...
Buuxinta Jadwalkayga Baltimore
Raadinta, raadinaya inuu ku sameeyo Baltimore in view in ka qeyb gali doona shirka of Systems Bentley, waxaan helay exposicón duug ah maal maps Navteq magiciisu yahay xiiso leh: "Helitaanka meesheenna ee dunida". Bandhiggan ayaa lagu qabtay Baltimore laga bilaabo Maarso ilaa Juunyo sanadkan iyo ...
Khariidadaha Google, oo leh khadadka casriga
Khariidadaha Google waxay ku darsadeen doorka muhiimka ah ee muujinta khariidada, oo ay ku jiraan khadadka konfurka oo ka yimid heer dhexe. Tani waxaa lagu hawlgeliyaa qeybta bidix ee "Relief" iyo barta badhanka waxaad ku furfuri kartaa ama uumi saari kartaa aragtida cirifka. Isha laga helayo qaabkan oo ah Google ayaa isku dhafay ...
Cartografia, Google Earth / Maps, topografia
Google Earth ayaa taariikhda cusub ee taariikhda, taariikhda 2008
Google ayaa ku dhawaaqday cusbooneysiisteeda bilowga Abriil ee 2008, si kastaba ha ahaatee waxaan kugula talinaynaa in aad hubiso wadamadaaga sababtoo ah wax kasta oo la cusbooneysiiyay ayaa la shaaciyay; ugu dambeyntii wuxuu ahaa dhammaadkii Janaayo. Google waxay ku wargelineysaa waddamada dib loo cusbooneysiiyay sawirkii dhowaa, waxay u muuqataa, inay ka mid yihiin Panama, Cuba, Argentina, Bolivia iyo Spain ...
In post hore, waqti dheer oo aan ku qaatay sharxaya sida si ay u abuuraan Roobka a wadci isuduwaha isticmaalaya Excel, in UTM maray oo ugu danbeyn leexdo xagga file AutoCAD ah. Kadib marxaladda labaad waxaan arkeynay sida faylkaasi u dirayo codsi GIS si loo abuuro dusha sare ee gudaha ...
AutoDesk ESRI GIS kala cayncayn ah
Cartografia, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Waxaan dooneynaa inaan u adeegno layligan si aan u sharaxno qaar ka mid ah shaki ku saabsan habka ku saabsan sida loo qoondeynayo qiyaasta CAD. Waxaan isticmaali doonnaa tusaalaha horay loo dhisay, taas oo aan abuureyno mareegta UTM ee aagga waqooyiga 16 oo ka sameysan xaashida sare iyo dhisida AutoCAD. 1 Unugyada Tani waa dhibaatada ugu weyn marka ...
Dgn Dwg Google Earth KML GIS kala cayncayn ah
AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Halka laga helo khariidadaha Honduras
Badanaa dadku waxay raadinayaan kartoonka waddankooda, hay'adaha la xariira maamulka xuduudaha ee xayeysiinta, qashin-qaadka ama heerka wax-qabadka waxay badanaa leeyihiin meelo ay ku wadaagaan xogtooda. Xaaladdan waxaan kala hadli doonaa Honduras, sababtoo ah Google Analytics ayaa sheegay in ay jiraan Hondurans surfing this site sababo sidan oo kale ah, iyo sababta oo ah waxay ku biiraan ...
Qalabyada wax lagu barto oo baro joqraafiyada
Pro macnaheedu waa ka barashada shabakada aan ka ogaaday tan waa goob ay ku jiraan faylal fara badan oo ficil ah kuwaas oo noqon kara mid waxtar leh si loo barto joqraafiga. Faa'iidadooda waxay ka soo horjeedaa naqshadeeda cabsigelisa, url-feejignaan iyo adeegsigooda ... laakiin si fiican, aynu aragno sida qiimahaagu uugu yaryahay: Ciladaha Flash: Waxay leeyihiin heerar kala duwan oo adag ...
Khaladka ugu fudud markaad dhiseysid mashiinka kartoonka: Qaybta khariidada
Waxaan rabaa inaan u diyaargaroobo ereygan qalad aad u fudud oo lagu dhaqmo, inta badan 1: 10,000 iyo 1: Khariidadaha 1,000 loo isticmaalo ujeedooyinka cadawga ee laga soo qaatay 1: 50,000 Mesh. Xusuusnoow in boostada hore ee aan aragno sida loo abuuro mesh this, oo horey ayaan u aragnaa sida loo kala qaybiyo ilaa laga gaaro map 1: 1,000. Laakiin qaladka ugu fudud ...
Dhisidda mesh aagga UTM oo leh Excel iyo AutoCAD.
Wac sida aad jeceshahay, khariidadaha taxanaha ama xajmiga sawirrada, jaantuska jododa, marka aad u baahan tahay magaca waa midka ugu muhiimsan. Si tan loo shaqeeyo barnaamijka GIS waa inuu ahaadaa mid sahlan, laakiin malaha waxa aan hayno waa AutoCAD. Maalmo yar ka hor ayaan sharaxay asalka khariidadda kartoonka, iyo macnaha udubdhiska UTM; waxaan isticmaali doonaa ...
GIS kala cayncayn ah Xafiiska dilaaga ah
Beddelaan UTM isuduwaha in juqraafi Excel
Mashruucii hore waxaan ku tusinay warqad Excel si loogu badalo isuduwaha joqraafiga illaa UTM oo laga soo xigtay wargeyska Gabriel Ortiz. Aynu aragno qalabkan oo sameeya habka isku midka ah, taas oo ah, isku-duwaha qaabka UTM (Universal Traverso de Mercator) oo ogaanaya aagga, iyaga oo bedelaya latitudes ...
Shabakada Excel si aad ugu badasho Iskuduwaha Geographic si UTM
Mawduucani wuxuu fududeeyaa isuduwidda juquraafi ahaan juqraafi ee darajooyinka, daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada Isku-duwaha UTM. 1 Sida loo galo xogta Xogta waa in lagu farsameeyo xaashida sare, si ay ugu yimaadaan qaabka loo baahan yahay. Dabcan, xayiraadaha caadiga ah ee ku saabsan kala duwanaanta qiimaha aqbaley waa in ay ixtiraamaan ...
Boggii hore Page 1 ... Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 page Next